एसिया छनोटको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपालको प्रतिस्पर्धी को–को? - Everest Dainik - News from Nepal
एसिया छनोटको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपालको प्रतिस्पर्धी को–को?
काठमाडौं, चैत ६ । सिङ्गापुरमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) टी–२० विश्वकपको एसिया छनोटको अन्तिम चरणको खेल तालिका आज सार्वजनिक गरिएको छ । आइसिसीले सार्वजनिक गरेको एसिया छनोटको अन्तिम प्रतियोगिता आगामी साउन ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म सिङ्गापुरमा हुने भएको हो ।
याे पनि पढ्नुस टी–२० र्‍याङकिङमा ह्वात्तै उक्लियो नेपाल, आयरल्यान्ड नेपालभन्दा ४ स्थान तल
एशिया छनोटको फाइनल चरणको प्रतियोगितामा नेपालको पहिलो प्रतिद्वन्द्वी कतार परेको छ । नेपालले कतारसँग आगामी साउन ७ गते खेल्नेछ । त्यस्तै दोस्रो खेलमा मलेशियासँग साउन ९, कुबेतसँग साउन ११ र सिङ्गापुरसँग साउन १२ गते खेल्नेछ ।
एशिया छनोटबाट शीर्ष दुई टोलीले विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाउने छन् । ग्लोबल छनोट आगामी असोज १४ देखि कात्तिक १७ गतेसम्म यूएइमा आयोजना हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस नेपालद्वारा ओमानलाई २२२ रनको विजयी लक्ष्य, सागर पुनले बनाए ८४ रन !
ट्याग्स: Nepal cricket team